अनुगमन गर्न गएको टोलीको गाडी हिलोमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अनुगमन गर्न गएको टोलीको गाडी हिलोमा
डिसी नेपाल , १४ श्रावण २०७६
काभ्रे । डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा गरिएको कार्यक्रमको अनुगमन गर्न गएको टोली नमोबुद्ध नगरपालिका ३ चरुवाडाँडास्थित सडकको हिलोमा फसेपछि गाडी निकाल्दै। वर्षाका कारण अधिकांश ग्रामीण सडकहरु जोखिमपूर्ण बनेको छ। तस्वीर : पेमा लामा, रासस, बनेपा।